MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-08-18
သတင်းအမျိုးမျိုးထွက်နေတဲ့ ပြည်သူ့ စစ်နှင့် KIA တိုက်ပွဲတွင် အချို့ သတင်းဌာနတွေ ဖော်ပြထားသလို ပြည်သူ့ စစ်က စိန်ခေါ်လို့ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်၊ နယ်ကျွံလို့ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပေါ်ထွက် နေချိန်မှာဘဲ ဦးစခုန်တိန့်ယိန်းက ကေအိုင်အို၊ ကေအိုင်အေက ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင်နဲ့ ဂွမ်မော်တို့ကို ပေးတဲ့ စာပါတဲ့။
at 8/23/2013 10:14:00 PM No comments:
မိတ္ထီလာမှာ ကုလ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနား စီးလာတဲ့ ကားကို ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူအုပ်ရဲ့ ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်တားနား က ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားရာမှာတော့ မိတ္ထီလာ မှာ ရဲတွေရှိနေသော်လည်း အကာအကွယ်မဲ့သလို ခံစားရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကင်တားနား နဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှလဲ ကန့်ကွက်သူတော်တော်များနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပိုဆိုးလာတာက လူ့အခွင့်အရေး ဆိုရင် ခါးခါးသီးသီး ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့ရဲ့ အဖြစ်တွေပါ။
at 8/23/2013 09:59:00 PM No comments:
တိရိစ္ဆာန်များကို ဦးစွာ အသုံးပြုပြီးစစ်ဆေး ပြီးမှသာ
၀န်ထမ်းများမှ ရေထိန်းတံခါး စစ်ဆေးမည်။
၀န်ထမ်းတစ်ဦးမှာ အဆိပ်ငွေ့တစ်မျိုးကို ရှုရှုက်မိသဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် ဆက်လျက်ပြုပြင်ရာတွင် တိရိစ္ဆာန် တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု စစ်ဆေး ပြီးမှ သာလျှင် စက်ရုံဝန်ထမ်းများ ရေသွင်းဥမင်များအတွင်းသို့ ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်မည်ကာ အောက်ဆီဂျင်ဘူးများ အသုံးပြုစေမှာဖြစ်ကြောင်း ဘူးဂါးလျှပ်စစ်ကုမ္မဏီမှ မန်နေဂျာ ဦးလအောင်က ပြောသည်။
at 8/23/2013 09:48:00 PM No comments:
၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ KIO နှင့် အစိုးရ တို့၏ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး မှတ်တမ်း
at 8/23/2013 07:07:00 PM 1 comment:
ပန်ဝါမြို့ပေါ်ရှိ လာဝေါ်နှစ်ခြင်း ဘုရားကျောင်းတွင် အစိုးရ တပ်မတော်မှ ဗျုဟာထိုင်နေပြီး ဘုရားကျောင်းတွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ၀တ်မပြုနိုင်သည်သာမက ဘုရားကျောင်းအတွင်း ညစ်ပတ်သည့် အပြုမူများ ပြုမှုလျှက်ရှိနေသောကြောင့် ဒေသခံများ မှ ဗျူဟာအား ထိုဘုရားကျောင်းဝင်းမှ ပြောင်းပေးရန် အကြောင်းကြားစာ ၂ကြိမ်ပို့ပေးပြီး ဖြစ်သော်လည်း ယခုထိ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်အစဲက ဆိုသည်။
`ဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲ အိပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ၀တ်ပြုဖို့လာမှ သူတို့က သော့ဖွင့်ပေးပြီး အိပ်ယာတွေ သိမ်းကြတယ်။ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲ ဆေးလိပ် အရက်တွေ သောက်ပြီး ဖဲတွေ လည်းရိုက်ြကတယ်။အလုံးကသူတို့ကို ပြောင်းသွားဖို့အလိုရှိတယ်။ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစား ကြိုးစား ဘာမ မတတ်နိုင်ဘူး။´ဟု ဒေါ်အစဲမှ ဆိုသည်။
at 8/23/2013 05:18:00 PM No comments:
at 8/23/2013 03:15:00 PM No comments:
at 8/22/2013 11:09:00 PM No comments:
လာမည့် သြဂုတ်လ (၂၈) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ် လေးခုမှ စတင်၍ နှစ်ဖက် နိုင်ငံ များသို့ ပတ်စပိုစ့် များဖြင့် သွားလာ ဖြတ်သန်း ခွင့်ကို မထမဆုံး အကြိမ် တရားဝင် ခွင့်ပြု သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဦးစီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံး ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးသန်းနိုင်ထွန်းက ပြောသည်။
“ဒီကိစ္စကို နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရတွေ ညှိနှိုင်း ပြီးပါပြီ၊ ဗီဇာ ပါရမယ်၊ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ပါရမယ်၊ အရင်လို အပေါ်လမ်း (လေကြောင်း) ကနေ မဟုတ်ပဲ ဒီနယ်စပ်ဂိတ် တွေက နေလည်း တရားဝင် သွားလာလို့ ရပါပြီ” ဟု ဦးသန်းနိုင်ထွန်းက ပြောသည်။
at 8/22/2013 07:00:00 PM No comments:
at 8/22/2013 02:24:00 PM No comments:
အစိုးရအာဏာ မသက်ရောက်သည့် စစ်ဘေးသင့်ဒေသများသို့ ကုလသမဂ္ဂက တစ်နှစ်အတွင်း အကူအညီ တစ်ကြိမ်သာ ပေးနိုင်ခဲ့သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၀ ရက်ကြာ ရောက်ရှိခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တားနားက သြဂုတ် ၂၁ ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
“ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ ဒီဒေသနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအရဆိုရင် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ဖွယ်ရာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အစားအသောက် လုံလောက်ရေးက အရေးကြီးဆုံးပါပဲ”ဟု ခရီးစဉ်အပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာသည့် နေ့က ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ သူ ကပြောဆိုခဲ့သည်။
at 8/22/2013 11:16:00 AM No comments:
at 8/21/2013 07:22:00 PM4comments:
at 8/21/2013 04:38:00 PM No comments:
Lahta Sam Mung Namhkam Hte Manwing Mayan Hta Ka-Ni Nang Hpam Dut Sha Ai Ni Grau Law Wa
Lahta Sam Mung, Manwing (Manwaing Gyi) mare hte Nam Lim Pa Myen Auya Hpyen Dap ni dap jung nga ai makau mayan hkan ka-ni naghpam hpe wanglu wang lang dut shabra nga ai hte ka-ni nang hpam lu ai masha mung grau law jat wa nga ai lam ni hpe na chye lu ai.
Lai wa sai July shata hta ka-ni nang hpam hpe Manwing mare kaw madung dut shabra nga ai rai tim Myen Asuya Balik Dap ni kalang lang sa shachyut ai majaw ka-ni nang hpam dut shabra ai hte ka-ni lu sha ai masha law malawng Nam Lim Pa, Myen Asuya Hpyen Dap ni dap jung nga ai shara hte ni ai de htawt mat nna ya ten du hkra dai ginra ni hta wang lu wang lang ka-ni nang hpam dut shabra nga ai hte ka-ni nang hpam wang lu wang lang lu sha nga ai lam ni hpe chye lu ai.
at 8/21/2013 04:35:00 PM No comments:
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိ ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အိမ်ထောင်စု တစ်ထောင်ကျော်အတွက် ကချင်ပြည်နယ် ကြက်ခြေနီအသင်းက အိမ်တွင်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်းကို KIO က လက်ခံခြင်းမရှိသေးပေ။
ကြက်ခြေနီအသင်းက သွားရောက်လှူဒါန်းလိုသည့်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG မှတစ်ဆင့် KIO သို့ တောင်းခံခဲ့ရာတွင် KIO က လက်မခံကြောင်း တုန့်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာက ဆိုသည်။
at 8/21/2013 03:27:00 PM2comments:
MMA ကစားသမား အောင်လအင်န်ဆန်းက တွစ်တာသုံးသူ ပါ။
သူ့ တွစ်တာလိပ်စာက https://twitter.com/AungLANsang ဖြစ်ပါတယ်။
တွစ်တာမှာ သူတွိထားတာ ၄၀၀ ကျော်၊ သူ နောက်က လိုက်တာက ၉၀ ကျော်၊ သူ့နောက်လိုက်တဲ့ ပရိသတ်က ၃၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။
at 8/21/2013 02:01:00 PM No comments:
at 8/21/2013 09:58:00 AM No comments:
သူ့အိပ်ခန်းနံရံပေါ်မှာ အမေရိကန် အလံ မကပ်ပဲ ကေအိုင်အေအလံ ကပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဖွစ်ဘွတ်ထဲမှာ ကေအိုင်အေ စစ်သားတွေရဲ့ ဆုတောင်းနေတဲ့ ဓါတ်ပုံထည့်ထားပြီး စစ်မှန်တဲ့ လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေပါ၊ တနေ့တချိန်အတူ ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ မျော်လင့်ပါတယ် ဆိုပြီး ချီးကျူးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
at 8/20/2013 07:08:00 PM No comments:
at 8/20/2013 05:54:00 PM No comments:
(Ven Ravika FB page)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးရမည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့ ပထဝီကို အခြေခံသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်မဟုတ်ဘဲ လူမျိုးကို အခြေခံသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်သာ ဖြစ်သင့်သည်။
၁၉၆၁-ခုနှစ်တွင် တောင်ကြီးညီလာခံတွင် သဘောတူညီခဲ့သော ရှမ်းမူအရ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ဟူသော (၈)ပြည်နယ်တို့ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် ဖြစ်သည်။
at 8/20/2013 05:06:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကြက်ခြေနီအသင်းမှ ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နေမြေရှိ အိမ်ထောင် (၁၃၀၀)ကျော် စစ်ရှောင်တိမ်းနေထိုင်သူများအတွက် မိသားစုအသုံးအဆောင်၊ကျန်းမာရေးအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများနှင့် တခြားပစ္စည်းများလှူဒါန်းရန်ု အေအိုင်အိုမှ လက်မခံကြောင်းသိရသည်။
ကေအိုင်အိုနှင့် အစိုးရ တပ်မတော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခိုင်မာစွာ မတည်ဆောက်နိုင်သရွေ့ အစိုးထံမှ မည်သည့် အကူအညီကိုမှ လက်မခံနိုင်ကြောင်း နှင့် နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီအသင်းမှ တိုက်ရိုက် လာရောက်လှူဒါန်းလျှင် လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကေအိုင်အိုက PCG မှ တဆင့်ပြောကြောင်း ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာ ကပြောသည်။
at 8/20/2013 05:04:00 PM No comments:
တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် အများအပြား အတွက် ဖြေရှင်းရ ခက်သည့် အကြောင်း တခုရှိနေပါသည်။ သူတို့က စကား တခွန်း ကို စာချုပ်တခုလို မှတ်ယူ သည့် နိုင်ငံရေး အစဉ်အလာကို လက်ကိုင် ထားကြသည်။ သူတို့က စစ်ပွဲ တွေကို ရပ်ပြီး ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းချင်ကြ သည်။ သို့သော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ယုံကြည်ပေးဖို့ စိတ်ထဲ မှာ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေကြသေး၏။
ဦးသိန်းစိန်၏ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းက ဘာကြောင့် စကားမတည်နိုင်ရသနည်းဟု သူတို့ စောကျောနေကြသည်။ ဦးအောင်မင်းသည် တပ်မတော်ကို အမှန်တကယ် မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းလား သို့တည်းမဟုတ် စကားပရိယာယ် သုံးနေခြင်းလား သူတို့ စဉ်းစားနေကြသည်။ အစိုးရက တပ်မတော်ကို ဘာကြောင့် အပြည့်အ၀ မထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အသွင်မျိုးဖြစ်နေရသနည်း ဆိုသည့် မေးခွန်းက သူတို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံး မေးခွန်းဖြစ်လာသည်။ သို့သော်လည်း တိုင်းရင်းသားများသည် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနှင့် ဆက်သွယ်ပတ်သက်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
at 8/20/2013 04:55:00 PM 1 comment:
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ ၁ လက်အောက်ခံတပ်ရင်း အခြေစိုက်ရာ ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့
မြောက်ပိုင်းဒေသ လောခေါင်ကျေးရွာအနီး နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်တွင် တိုက်ပွဲ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု KIA စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ကူညီရေး ကော်မတီတာဝန်ခံ ဦးဒွဲပီဆားက
at 8/20/2013 10:35:00 AM No comments:
at 8/19/2013 10:29:00 PM No comments:
မစ္စတာ ကင်တားနား ကချင် ပြည် နယ်မှ ထွက်ခွာ သွားပြီး နောက် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ကချင် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KIA နှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲ များ ပြန်လည် ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း KIA ၏ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘို က ပြောသည်။
“၁၇ ရက်နေ့က ကျနော် တို့ တပ်မဟာ (၁) ဘက်မှာ ရှိတဲ့ တပ်ရင်း (၁၀) ရဲ့ ရှေ့တန်း စခန်းကို အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ တို့က လာရောက်တိုက်ခိုက် ခဲ့တယ်။ တိုက်ပွဲ ကတော့ ပြင်းထန် တယ်လို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ကင်တားနား ပြန်သွား တာနဲ့တိုက်ပွဲက စတော့ တာဘဲ” ဟု ဆိုပါသည်။
at 8/19/2013 04:29:00 PM No comments:
သဘာဝ တရားနဲ့ ပတ်သက် တာ သေချာ တဲ့ အခိုင်မာအချက် တခု ရှိနေပါတယ် အရင်က လည်း မှန်တယ် အခုလည်း မှန်နေတုန်းပဲ။ အဲဒါ သူရိန်နေမင်း ယခု လင်းနေတာ သူ့အစွမ်း တခုထဲနဲ့တောက်လောင်နေ တာမဟုတ်ဘူး။ နေ ဆိုတာ ကြီးမားပြီး အမြဲတမ်းတောက်လောင်နေ တဲ့ သူ့စွမ်းအင် က ကြီးမား တဲ့ ကြယ်ကြီးတစင်းပါ။ သို့ပေမယ့် သူက မငြိမ်းနိုင်ပဲတောက်လောင်ခွင့်ရနေတာဘာကြောင့်လဲ? အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါ၊ အဲဒါ အခုနေမင်းကြီးက သူ့ရဲ့တောက်လောင်မှုတွေအတွက် လောင်စာတွေကို သူ့နံဘေးနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ လွင့်မျောနေတဲ့ လှည့်ပတ်နေတဲ့ ဂြိုလ်ငယ်တွေ ဥက္ကာ အစိုင်းခဲ့ သန်းပေါင်းများစွာတွေကို ရရင်ရသလောက် သူစွမ်းအင်နဲ့ ဖမ်းစားပြီး သူ့အလင်းအတွက် တောက်လောင် ပေးဖို့ စုပ်ယူဆွဲသွင်းပြီး လောင်ကျွမ်းတောက်ပနေတာ သဘာဝတရားပဲ။
at 8/19/2013 04:21:00 PM No comments:
မြန်မာပြည် တွင် ကမ္ဘာ အရှည်လျား ဆုံးသော မျော့ကြီး တကောင် ဇွန်(June) လ (၂၇)ရက်နေ့ မှ နှစ်ပေါင်း ၅၀ စာချုပ်ဖြင့် စတင်သွေး စုပ်ယူတော့ မည့် စာချုပ်ကြီး အသက် ၀င်တော့ မည်။
၄င်းမျော့ ကြီး ၏ အရှည် သည် ကီလိုမီတာ ၇၇၁ ကီလိုမီ တာရှိပြီး မိုင်အကွာဝေး အရ (၄၇၉) မိုင်ရှည် လျားသော ဧရာမ အရှည်လျား ဆုံးမျော့ကြီးဖြစ်၏။
at 8/19/2013 04:15:00 PM No comments:
at 8/19/2013 04:08:00 PM No comments:
at 8/19/2013 03:59:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ဘက် KIA,တပ်မဟာ (၁) လက်အောက်ခံ၊ KIA, တပ်ရင်း (၁၀)အုပ်ချုပ်ဒေ သ၊ လောခေါင်မြို့ နယ် အတွင်းရှိ KIA, တပ်ရင်း (၁၀)၏ ရှေ့တန်းစခန်း (ပို့စ်) တစ်ခုအား (၂၀၁၃ ၊ သြဂုတ်လ ၊၁၇) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် (ခ.မ.ရ-၅၁၂) တပ် နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF)တပ်တို့ ပူးပေါင်း အင်အား (၃၀၀) ကျော်တို့ ဖြင့် လာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း ကြောင့် (၁၇၊၈၊၂၀၁၃) ရက်နေ့ နံနက် (၆း၄၅) အချိန် မှ မွန်းလွဲ (၀၁း၃၀)အချိန် အထိ အပြင်းအထန် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်း ရရှိပါသည်။
at 8/19/2013 03:57:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dingdung Ginwang KIA Dap Ba (1) n pu, KIA Dap Dung (10) Ginra rai nga ai Law Hkawng hta August (17) ya shani KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen tai hpyen ni gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. KIA Dap Dung (10) n pu na shawng lam post langai mi hpe myen hpyen asuyaahpyen dap hk-m-y (521) kawn n gun kaba hte sa htim gasat wa ai majaw ya na zawn majan byin wa ai re lam hpe na chye lu ai. August (17) ya jahpawt hkying (7:00 AM) ten ram kawn shani hkying (1:30 PM) ten ram du hkra gasat lai wa ai lam hpe na chye lu ai.
at 8/19/2013 03:53:00 PM No comments:
“Burmese Python” လို့ ထင်ရှားတဲ့ ကချင် တိုင်းရင်း သား အောင်လအင်န်ဆန်း စနေနေ့က အမေရိကန် လက်ဝှေ့ထိုးသတ်ပွဲတခုမှာ နိုင်ပွဲရလိုက်ပြန်ပါပြီ။
သူ့ပြိုင်ဘက်ကတော့ Shedrick Goodridge ဖြစ်တယ်လို့ ဧရာဝတီ သတင်းတပုဒ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
နာမည်ပြောင်က Chocolate Thunder ဖြစ်ပါတယ်။ ချောကလက်ရောင်မိုးကြိုး လို့ ဘာသာပြန်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
at 8/19/2013 02:58:00 PM No comments: